Akkas Jedhe Ashaagireen Saalfii Hin Beekne! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAkkas Jedhe Ashaagireen Saalfii Hin Beekne!
Dhukkuba #Korona_Vaayirasii biyya keessa erga facaasee ka’een booda mindaa kiyya baatii tokkoo faffaca’iisa dhikkubichaa bakka jirutti dhaabsisuuf wareegeera nuun jedhe Ajab
Ani kaniin jedhu mindaan isaa meeqa?
#Ashaagireen sobee biyya saamuuf akka hojjattoonni mootummaa hundi isa ilaalanii mindaa isaanii tan daabbooyyuu isaaniif bituu hin dandeenya harkaa saamuuf tooftaa ajaa’ibaa baafatee gadi bahe . Ammas ammaa utuu guyyaa lama hin oolle wal gahii waamee maallaqa walitti guuraa jedha namni guyyaa saafayaan nama saamuuf bahe nama afaan boollaa taa’ee nama afaan boollaa jiru irraa qarshii guurachuuf hammuummatu #Abiyoot_Minilik qofaadha
Innumtuu torbee kana ganaaf galgala ibsa biraa dhiisee ibsa kadhaa qofa baasaa oola ani gama kootiin yeroo jalqabaaf nama ofiif ormaafis harka banee kadhatu arge sanuu mootummaa biyya bulchu ta’ee. Utuu mindaan kee meeqa jedhamee gaafatamee akkuma #Azeb_Masfin mindaan #Mallasaa (4500)n jette #Abiyooyis mindaan koo (10’000) nuun jedha ija soogiddaan dhiqatee
Gaafiin keenya guddaan xiqqeennaaf guddeenna mindaa isaatii miti mindaan inni koronaa dhaabuuf qareege kun dhuguma koronaa ni dhaabaa? minda ji’a tokkoo yoo wareege hamma baatiin kuun deebi’ee dhufuuf maal nyaachuuf?
mindaa baatii tokkoo wareeguu mannaa karaa ummanni dhukkuba kana jalaa baraaramuu danda’aniin mijeessuu hin wayyuu keessaafuu wal gahii waamuu teessisuu irraa of qusachuu
Sosochii magaalaa tokkoo gara magaalaa biraa dhaabuu wayya ture isaan dhukkuba facaasanii wal gahii waamaa waamsisaa har’a ummata ittiin saamuuf mindaa baatii tokkoo jedhanii tooftaa hannaatiin gadi bahu isaan yakkamtoota saamtota gantoota kana har’as yoo kan duunu ta’eeyyuu dhugaa lallabaa duuna karaa jallootaa irraa gorree duuna duuti daandii haqaa irratti haa ta’u
Hattuuf kosii tuultuu maratti dhugaa himuun dirqama har’as boris #Bilxiginnaan ummata oromoof diina ummata oromoof summiidha summiidhaan nadhiidha hin jennu gantuudhaan fira hin jennu itti himna
Gujiif wallagga ukkaamsaa ajjeesaa anaan fira jechuun innumtuu yakka
Ilmi #Minilik #Abiyyot oromoof diina hamaadha wayyaanee lammaffaan oromoo bakka hin bu’u
Yaa hoorroo koo yaa Naqamtee
Afaan kee qabde hattuun
Yaa Dabbii koo yaa qeellamii
Harka kee marte yartuun
Kufnee cabnee hin hafnu
Moo’atamnee bin rafnu
Yaa Shaambuu lafa loonii
Kqn Dawoon odaa magarsu
Yaa Boojjii mana gootaa
Gantuun maaliif si arrabsu?
Gola kee goonni jira
Golloo kee irra marsee
Dhiiga jigsee si tiksaara
Hin gurguru si dabarsee
Lubbu ofii siif gumaachee
Lafee ofii si’iif csbsee